Hrdị atomic nke Bohr. Kpụrụ, njehie na adịghị ike | Netwọk Mgbasa Ozi
Ever hụtụbeghị Bohr atọm nlereanya. Nke a bụ ezigbo nchọpụta dị mkpa onye sayensị a mere maka sayensị, ọkachasị electromagnetism na electrochemistry. Na mbụ enwere ụdị nke Rutherford, bụ nke na-agbanwe agbanwe ma nwee ọganiihu, mana enwere esemokwu ụfọdụ na iwu atọmịk ndị ọzọ dịka nke Maxwell na nke Newton.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ụdị bọmbụ Bohr, yana nkọwa ya iji mee ka enwere obi abụọ ọ bụla na isiokwu a.
1 Nsogbu ọ nyeere aka idozi
2 Ike larịị nlereanya
3 Hrkpụrụ atọmịk nke Bohr
4 Mmachi na njehie nke ụdị atomic Bohr
Nsogbu ọ nyeere aka idozi
Dị ka anyị kwuru ná mmalite isiokwu a, ụdị atọm a nyeere aka dozie esemokwu ụfọdụ ndị metụtara iwu ndị ọzọ. Na ụdị Rutherford gara aga, anyị kwesịrị electrons na-ebugharị na ụgwọ eletriki na-adịghị mma aghagoro ụdị radieshon electromagnetic. Ekwesiri imezu n'ihi iwu nke electromagnetism n'èzí. Ọnwụ ike a na-eme ka ndị electrons belata na orbit ha site n'ịgbagharị gaa n'etiti. Mgbe ha rutere na etiti ha dara, na-adaba na isi.
Nke a mepụtara nsogbu na tiori ebe ọ bụ na ọ nweghị ike ịdaba na ntọala nke atọm, mana ntụgharị nke ndị elektrọn ahụ kwesịrị ịdị iche. Emere nke a site n'ụdị atọmịk nke Bohr. Ọ na-akọwa na ndị elektrọn na-agba gburugburu gburugburu na okirikiri ụfọdụ a na-anabata ma nwee ume pụrụ iche. Ike ruru ka Planck oge niile.
A na-akpọ orbit ndị a anyị kwurula ebe electrons na-aga, a na-akpọ akwa ume ma ọ bụ ogo ume. Nke ahụ bụ, ike nke elektrọn abụghị otu mgbe niile, mana a na-agụ ya. Antdị quantum bụ orbits dị iche iche a na-ahụ atọm. Dabere na orbit ọ dị na oge ọ bụla, ọ ga-enwe ike ma ọ bụ obere ume. Orbit dị nso na ntọala nuklia nwere ume ka ukwuu. N'aka nke ọzọ, ka ha na-esi n'ebe a na-ewepụ ihe ndị dị na ya, otú ahụ ka ume ha na-ebelata.
Ike larịị nlereanya
Ihe omuma a nke Bohr, nke putara na ndi elektrọn nwere ike inweta ma obu tufuo ike site n’itite n’otu uzo gaa na nke ozo, nyere aka idozi ida ida nke ihe Rutherford kwuru. Mgbe ọ na-esi n’otu ike banye n’ọzọ, ọ na-amịkọrọ ma ọ bụ na-ebute radieshon ndọrọndọrọ. Nke ahụ bụ, mgbe ị na-amali elu site n ’ụgwọ ọrụ ike karịa karịa gaa na nke na-akwụchaghị ụgwọ, ị hapụ ike karịrị akarị. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na o si n'ogo dị ala karịa na nke dị elu karịa elu, ọ na-amịkọrọ ụzarị electromagnetic.
Dika atumatu atumatu a bu mgbanwe nke ihe nlere nke Rutherford, a na-echekwa njirimara nke obere etiti etiti ya na otutu ihe nke atom. Ọ bụ ezie na ngagharị nke electrons anaghị adị larịị dị ka nke mbara ala, enwere ike ịsị na ndị elektrọn a na-agagharị gburugburu ha dị ka mbara ụwa ndị ọzọ na Sun.
Hrkpụrụ atọmịk nke Bohr
Ugbu a, anyị ga-enyocha ụkpụrụ nke usoro atọmịk a. Ọ bụ maka nkọwa zuru ezu banyere ụdị ihe atụ a na arụmọrụ ya.
Ahụ nke nwere ụgwọ dị mma Ha nọ na obere ịta ma e jiri ya tụnyere mkpokọta olu nke atọm.
Electron na a na-adịghị mma eletriki ụgwọ bụ ndị na-hụrụ n'usoro gburugburu na okirikiri orbits nke ike.
Enwere ume ike nke orbits nke electrons na-ekesa. Ha nwekwara oke a haziri ahazi, ya mere, ọ nweghị ọnọdụ etiti n'etiti orbits. Ha na-esi n’otu ọkwa baa n’ọzọ.
Ike nke orbit ọ bụla nwere metụtara nha ya. Ka orbit na-aga n'ihu site na ntọala nke atọm, otú ahụ ka ọ na-enwekwu ike.
Ike ogo nwere nọmba dị iche iche nke electrons. Na-ebelata ike ike, obere elektrọn dị na ya. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na anyị nọ n'ọkwa otu, a ga-enwe ihe ruru electron abụọ. Na ọkwa 2, enwere ike ịnweta elektrọn 8, wdg.
Mgbe elektrọn na-esi n’otu orbit gafere na nke ọzọ, ha na-amịrị ma ọ bụ hapụ ike ndọta. Ọ bụrụ n’ịga site n’otu ike ike gaa na nke ọzọ, ị ga-ewepụ ike karịrị akarị na nke ọzọ.
Ihe nlere a bu nke mgbanwe ma gbalịa inye nguzosi ike na ihe ihe omuma ndi mbu enweghi. Eji ụdị atọm a kọwaa nkọwa pụrụ iche na ikuku na gas nke gas. Ọ bụ ihe nlere izizi nke webatara echiche nke quantization ma ọ bụ quantization. Nke a na-eme ka Bohr si atọm nlereanya ka a ga-ewere dị ka ihe nlereanya nke bụ ọkara n’etiti usoro ọrụ gboo na klọntị. Ọ bụ ezie na o nwere adịghị ike, ọ bụ ihe atụ nke mbido maka usoro ọrụ nke Schrödinger na ndị ọkà mmụta sayensị ndị ọzọ.
Mmachi na njehie nke ụdị atomic Bohr
Dị ka anyị kwurula, ihe nlereanya a nwekwara ụfọdụ adịghị ike na njehie. Nke mbụ, ọ naghị akọwa ma ọ bụ na-enye ihe kpatara electrons ga-ejedebe nanị na orbits a kapịrị ọnụ. Ọ na-eburu ozugbo na electrons nwere okirikiri na orbit mara. Otú ọ dị, nke a abụghị eziokwu. Afọ iri gachara Uncerkpụrụ a na-ejighị n'aka nke Heisenberg gosipụtara nke a.
Ọ bụ ezie na ụdịdị atọm a nwere ike igosipụta omume nke elektrọn na atọm hydrogen, ọ bụghị etu a ka ọ dị n'ihe gbasara igwe nwere ọnụ ọgụgụ dị elu nke elektrọn. Ọ bụ ihe nlereanya nwere nsogbu ịkọwapụta mmetụta Zeeman. Mmetụta a bụ ihe a pụrụ ịhụ mgbe e kewara eriri ahịrị abụọ ma ọ bụ karịa na ọnụnọ nke oghere ndọta na mpụga.
Ọzọ nke njehie na-agaghị emeli na ihe nlereanya a nwere bụ na ọ na-enye ihe-ezighi ezi uru maka angular ọkụ nke ala ala orbit. Njehie ndị a niile na erughị eru ndị a kpọtụrụ aha na-eme ka usoro mpempe akwụkwọ Bohr jiri tọọsụ kwụrụ afọ ole na ole gasịrị.
Enwere m olileanya na site na isiokwu a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ụdị atọmịk Bohr na ngwa ya na sayensị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Bohr atọm nlereanya